လမ်းပြဖို့ လမ်းပျောက်နေသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » လမ်းပြဖို့ လမ်းပျောက်နေသူများ
Posted by zoxnet on Apr 23, 2010 in Drama, Essays.. |6comments
တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်း ယူကျုံးမရ ဖြစ်တာရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒါကလည်း နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်တွေသွားပြီး အဲဒီမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ပါ။ အဲဒီ အကြောင်းတွေကို ပြောပြလို့ ကျွန်တော့်ကို အမြင်တော့ မကတ် လိုက်ပါနဲ့။ နေရာတကာ လျှောက်ပြောနေတာပဲ ဆိုပြီးတော့လည်း အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲက ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးကလည်း ဘယ်လိုမှ တားမရလို့၊ နောက် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေကို တိုက်တွန်းချင်စိတ်ရှိလာလို့ ပြောရတာပါ။ ကျွန်တော် ဆော်ဒီ နိုင်ငံကို ရောက်တုန်းက ဆော်ဒီနိုင်ငံလေဆိပ်ကို ခြေချရင်ပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘင်္ဂါလီစကားကို စကြားရပါတယ်။ အမှိုက်သိမ်း၊ သန့်ရှင်းရေး နဲ့ တောက်တိုမယ်ရ လူတွေအားလုံးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေချည်းပါပဲ။ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ်စတန် နိုင်ငံသားတွေကတော့ အနည်းအကျဉ်းရှိပါတယ်။ ဒါက လေဆိပ်မှာပါ။ ကျွန်တော် မြို့တွင်းရောက်ပြီး၊ ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ နေထိုင်စဉ်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေနဲ့ပဲ များသောအားဖြင့် ဆက်ဆံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ဘင်္ဂါလီစကားတွေပဲကြားရတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်သာ ဘင်္ဂါလီစကား မတတ်ခဲ့တာပါ။ ကြားရပါများလို့ နည်းနည်းပါးပါးတောင် နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကို မေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ လူမျိုးတွေ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလောက်များတာလဲလို့။ သူတို့က ပြောပါတယ်။ ပထမတော့ အဆက်အသွယ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ ရောက်လာတယ်။ နှစ်နည်းနည်းကြာပြီး အဆင်လည်း ပြေလာတော့ ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကလူတွေကို ပထမရောက်နေတဲ့ လူတွေက ဆက်သွယ်ခေါ်ယူတယ်။ အဲဒီလို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူ လမ်းပြရင်းနဲ့ ကြာလာတော့ အခုလိုများလာတာပါ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်ချို့ဆို တစ်မျိုးလုံး တစ်ဆွေလုံး အဲဒီမှာ ရှိနေတာကို ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ ဆော်ဒီမှာ နိုင်ငံခြားလူမျိုး အများဆုံးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေပါ။ နောက်ပြီး ကာတာ၊ ဘာရိန်း တို့လို နိုင်ငံတွေမှာဆို အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသားတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ အများဆုံးပါ။ သူတို့လည်း အဲဒီလို ပထမလူက နောက်ပေါက်တွေကို ခေါ်ရင်းနဲ့ များလာရတာပါ။ ဟော…. ဒူဘိုင်းမှာဆို အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကရလာ လူမျိုးတွေက တော့်တော့်ကို များပါတယ်။ နေရာတကာ သူတို့စကားသံတွေပါပဲ။ ပိုစေရှင် ကောင်းတွေမှာ ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက် လူတွေအဖြစ် ရှိသလို တောက်တိုမယ်ရ လူတွေလည်း သူတို့လူမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အာရဗ်တွေထက်တောင် ဦးရေများမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့တောင် သတင်းအပါအ၀င် တခြားအစီအစဉ်တွေကို ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာ လွှင့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟော်တယ်မှာလည်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကရလာ အလုပ်သမားတွေပါ။ သူဌေးကလည်း ကရလာ လူမျိုးပါပဲ။ ကျွန်တော်တောင် ကံကောင်းလို့ ဗမာတစ်ဦး ပါလာတာပါ။ ကျွန်တော့်အထင် ကရလာ တွေပဲ အလုပ်ခန့်ချင်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်တော့ …
သူတို့တွေဟာ နိုင်ငံခြားမှာ လမ်းတစ်ခုပွင့်လို့ အဆက်အသွယ် ကောင်း တစ်ခုရပြီ ဆိုရင် သူတို့ နိုင်ငံက လူမျိုးတွေကို လက်တွဲခေါ်ယူပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေ ရှာပေးပါတယ်။ လမ်းပြပါတယ်။ ကူညီပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေ အချင်းချင်း ညီညွတ်ပြီး နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတွေမှာ သူတို့လူမျိုးတွေ များပြားလာရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေလည်း နိုင်ငံခြား နိုင်ငံတွေမှာ အသီးသီး ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မြန်မာလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်၊ အုပ်စိုးထားတယ် ဆိုပြီး မကြားမိပါဘူး။ မလေးရှားမှာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း နယ်စပ်က ခိုးသွားပြီ အိုဗာစတေးနဲ့ ဟိုပြေးဒီပြေး နေနေရတဲ့ သူတွေလောက်သာ ရှိတာပါ။ နိုင်ငံကြီး နိုင်ငံကောင်းတွေမှာ စောစောစီးစီ ရောက်ပြီး အဆင်ပြေ လမ်းပွင့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ နောက်ပေါက် လူတွေကို ခေါ်ယူလမ်းပြဖို့ ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ တစိမ်းကို ခဏထား၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းကို တောင် ခေါ်ဖို့ တော်တော့်ကို ၀န်လေးပါတယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေပါ။ ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုတိုးတက်မလဲ။ ဘယ်လို နိုင်ငံခြား အတွေ့အကြုံတွေ တိုးပွားမလဲ။ သူများတွေကို ဘယ်လို ကျော်တက်မလဲ။ ဒါဟာ စဉ်းစားစရာပါ။ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားနေပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့လဲ စဉ်းစားပေးကြပါ။
မင်းလှေမျောလဲ မဆယ်နဲ. ခြေနှစ်ချောင်းလဲမကယ်နဲ.
နောက်တစ်ခု က ကယ်မိလို.ခံလိုက်ရတဲ.သူတွေရှိခဲ.လို.လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
I agree with you kopauk
ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတာကိုတွေးပြီး
ကျေးဇူးကန်သူတွေ ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကို မပျက်စီးစေသင့်ပါဘူး
ရွှေမန်းမေအထင်တော့ မြန်မာလူမျိူးများပာာ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုမှာ အားနည်းတယ်မှတ်တာပဲ ။
မြန်မာတွေနယ်ချဲ့လက်အောက်မှာနှစ် ၁၀၀ကျော် နေခဲ့ရတာလဲဒီစိတ်တွေကြောင့်ပါ။
အချင်းချင်း ကွယ်တာနဲ့အတင်းပြော ၊တွေ့တာနဲ့ပြုံးပြ၊ ဒီတယောက်ကျောခိုင်းတာနဲ့ ဒီတယောက်အကြောင်းပြော ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့ ဘုရားရွတ်လိုက်၇တဲ့ ပုရိတ်တရားဆိုတာလဲ သောတပန် အနာဂမ်တွေကတောင် အရှုံးပေးရမယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်သဘောက်ဘ၀နဲ့ နေခဲ့တာတောင် ကို်ယ်တွေဘာမှားလဲမသိကြဘူး၊
မစည်းလုံးလို့လေ။ အချင်းချင်းအထင်သေးနေလို့လေ ။ ကိုယ်ကောင်းစားရင်ကိုယ့်လူမျိုးကို ကယ်တင်ပေးတဲ့မြန်မာဘယ်နှယောက်တွေ့ဘူးလဲ၊
အဲလိုအမြှောက်ပေးကောင်းတော့ ကျွန်မ ခင်ပွန်းက သူ့ယောက္ဖတွေကို သူ့ညီမယောင်္ကျားတွေပါ အဲဒါတွေကို ကြီးပွားတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးလိုက်တာ ပိုက်ဆံတွေပြန်မရတော့ဘူး ဒီလိုမျိုးကြုံလာပြန်တော့လဲ၊ အော် ငါတို့မြန်မာတွေ မကူရင်လည်းမကူလို့ကူပြန်လဲ ပြန်ကျေးဇူးမဆပ် ကျေးဇူးမသိလို့ရယ် စိတ်မကောင်းရပြန်ဘူး၊
ပညာတက်ဘ၀လိ်ု့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျွန်မတို့ဘ၀မှာ ဆင်ခြင်တုံ့တရားတွေကများ
အသိတရားကများနေတော့ အမှားကိုမြင်တဲ့ကျွန်မတို့ကပဲ စိတ်မကောင်းကြယုံသာပေါ့ရှင်။
သို့သော်လည်းကျွန်မဖြစ်စေချင်တာက လူတိုင်း ငွေအားနဲ့မကူညီရင်တောင် နှုတ်အားဖြင့် ကိုယ်အားဖြင့်တော့ ကူညီစေချင်တယ် ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အခုဖြစ်နေတာက မြန်မာလူမျိုးတွေ ငွေတော့ ရှိလာကြပါတယ် အဆင့်အတန်းတွေက နိမ့်လာကြတာကိုသွားတွေ့နေရတယ်။
ငွေရှိတာနဲ့ အဆင့်အတန်းရှိပြီလို့ ထင်နေတာကလည်းခက်တယ်။
ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာက ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေကို စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့််အတန်းရှိစေချင်တာ ဒါဆို အားလုံး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကလည်း နေ့စဉ်ရှင်သန်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က အများစုပြုပြင်တာဆိုတော့ စာသင်ကျောင်းတွေက အဓိကပြုပြင်ပေးစေချင်တယ်။ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေက ကလေးတွေကို စာပေသင်ကြားယုံတင်မကဘဲ စိတ်ဓာတ်ကိုအဓိက ပြုပြင်ပေးစေချင်တယ်။ဆရာမတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေ ကျူရျှင်တက်ဖို့ ပိုက်ဆံချုဖို့မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် တကယ်လုပ်နိုင်မယ့် ဆရာဆရာမမျိုးကိုသာ ခန့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အနာဂတ် မျိုးဆက်လေးတွေ စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေရလာမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီစာသင်ကျောင်းတွေကိုသာ အဓိကထား ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရှင်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လေး အ လင်းရောင်ပေါ်လာမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်ကခလေးတယောက်ပါ အခုမှအသက် ၂၁ ပါ ကျွန်တော်တခုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဗျ မြန်မာလူမျိုးတွေနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသွားပြီးရင် ဒီကလူတွေကိုခေါ် တဖြည်းဖြည်းအဲနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိူးတွေများလာမယ် အဲနိုင်ငံကပညာတွေတက်လာမယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တကဗ္ဘာလုံးမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေပွားလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ပြီးပေါ့နော် ( ခလေးအတွေးလေးပါ ) ။